Tsindrio ny sakafonao amin'ny FeedBurner | Martech Zone
Alarobia, Aprily 11, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay, niasa tamin'ny tranokalako bebe kokoa aho hanatsarana ny fametrahana ny Search Engine. Ny fiovana dia niteraka fanovana fanampiny teo amin'ny toeran'ny Search Engine. Hanohy hizara ny valiny aminao aho rehefa mandroso aho. Iray amin'ireo fanovana vao haingana nataoko ny manitsy ny fifamoivoizana rehetra avy amin'ny http://dknewmedia.com mankany amin'ny http://martech.zone. Tiako ny www ho fonenako voalohany izay ahitàna ny lahatsoratro. Tsy azoko antoka hoe inona ny fiantraikan'izany - ho hitantsika izany.
Namaky lahatsoratra aho androany tao amin'ny Marketing Pilgrim amin'ny fanatsarana ny fahana. Mahaliana ihany, tsy tsapako fa mety ho voasazy ianao amin'ny alàlan'ny motera fikarohana noho ny atiny duplicate fotsiny satria ny anao RSS any ivelany ny feed! Ny lahatsoratra dia manamarika fa ny fanomezana tag meta noindex ao amin'ny fahana anao dia hisorohana ny motera fikarohana tsy handrindra ny pejin-tsakafoo.
Marina tokoa, nahita toerana iray aho Feedpress mamela izany. Ity misy pikantsary. Tapitra ny safidy raha tsy izany ianao dia mila manodina ny NoIndex ary hitahiry ireo fanefinao.
Feedburner dia serivisy miavaka. Arakaraky ny fampiasako azy no vao mainka mahavariana ahy. Hahita lahatsoratra maromaro ao amin'ny tranokalako momba ny serivisin'izy ireo ianao ary hampiditra azy ao amin'ny tranokalanao. Ny fampiharana tsikelikely dia ao amin'ny E-metrika famahana bilaogy torolàlana nosoratako.
Apr 11, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Misaotra amin'ny tendrony. Tsy hitako mihitsy io safidy io tetsy ambany.
Miloka ianao, Tracy. Raha ny marina dia tsy hitako mihitsy izany raha tsy androany! Efa nolazaiko taloha fa ny Feedburner dia fitaovana tsy mampino, sarotra ihany ny mandeha.
Apr 12, 2007 amin'ny 8: 16 AM
Soso-kevitra tsara Douglas!
Nahamarika an'io safidy io aho tamin'ny nandefasako ny feed feedburner ahy voalohany, saingy nieritreritra aho hoe "azo antoka… maninona raha avelao ny motera fikarohana hanisa ny feed-ko, hanampy fotsiny izany, marina!"
Toa diso aho. 🙂
Apr 12, 2007 amin'ny 8: 48 AM
Misaotra amin'ny tendron'i Douglas! Ampiharina avy hatrany 🙂
Apr 12, 2007 amin'ny 10: 11 AM
Misaotra anao noho ny tendrony hafa, Douglas. Nampihariko avy hatrany izany. Nahaliana ny mahita fa manana ny boaty fanamarinana izy ireo mba hampiharana mialoha ny nofollow, fa tsy navadika.
Apr 12, 2007 amin'ny 11: 33 AM
Misaotra amin'ny tendrony. Efa nofidiko io, saingy tsy tsapako hoe maninona (tsy dia nojerena mihitsy).
Apr 12, 2007 amin'ny 11: 48 AM
Hmmm, ny fiasa dia efa navitrika tamin'ny sakafoko. Azo atao ve ny mamela azy io amin'ny alàlan'ny default?
Apr 12, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Mahafinaritra ery. Misaotra!
Apr 12, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Ho fanampin'ity fampiasana robots.txt ity ary esory ny fahana avy aminy!
Hevitra tsara izany. Inona no fomba mora indrindra anaovana an'izany?
Tsara toerana ianao amin'ny fikarohana Technorati. Izay no nahitako ny bilaoginao - indroa - tsy nahy isaky ny mandeha.
Nieritreritra aho fa raha zavatra notadiaviko no nitondra ahy indroa tao anaty herinandro, dia mendrika mari-pankasitrahana izany
Tena tsara re izany, Thor. Manantena aho fa afaka mamaly ny antenainao! Hojereko koa ny bilaoginao! Miezaka manao izany amin'ny olon-drehetra aho mba hahafahako mandefa hevitra.
Apr 16, 2007 amin'ny 3: 02 AM
Ny feedburner koa dia tranokala PR 8 ka ranom-boankazo mahafinaritra ireo rohy ireo. Na dia izany aza, tsy azoko antoka hoe ahoana no ifandraisan'ny fanarahan-tsindry.
20 Jan 2010 amin'ny 3:32 PM
tendrony mahafinaritra, misaotra!
Aug 20, 2011 amin'ny 6: 04 AM